रंगशालालाई सहयोग जुटाउन धुर्मुस र पाँडेको टोली कपिलवस्तुमा, कहाँ हुँदैछ कार्यक्रम ? « Mayadevi Online News Portal
रंगशालालाई सहयोग जुटाउन धुर्मुस र पाँडेको टोली कपिलवस्तुमा, कहाँ हुँदैछ कार्यक्रम ?
प्रकाशित मिति : २२ चैत्र २०७७ आईतवार ०७:०४
धुर्मुस सुन्तली फाण्डेसनको टोली आज कपिलवस्तुका बिभिन्न स्थानमा रहने भएको छ । चितवनस्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माणको लागि सहयोग जुटाउन मेची महाकाली अभियानमा हिडेको टोली आज कपिलवस्तुका बिभिन्न स्थानमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सरिक हुने छन् ।
बुद्धभूमिस्थित होटल पौवामा रात कटाएका उनीहरु विहानभर गोरुसिंगे, इमिलिया लगायतमा आयोजना भएका कार्यक्रममा सहभागी हुने छन् भने १२ बजे बाणगंगामा आउने कार्यक्रम रहेको अभियान्ता अर्जुन घिमिरे (पाँडे) ले मायादेवीलाई जानकारी दिनुभयो ।
चार नम्बर चोकमा र पिपराको हिलवर्ट बोर्डिङ स्कुलमा हुने सहयोग कार्यक्रममा सिताराम कट्टेल (धुर्मस), हास्य कलाकार अर्जुन घिमिरे (पाँडे), नागरिक समाजका अध्यक्ष निगम हुमागाई, अभियान्ता अर्जुन भुसालसहित १० जनाको टिम आउने छ । सहयोग गर्न इच्छुकले नगदसंगै भौतिक कुराहरु पनि सहयोग गर्न सक्ने धुर्मसले बताउनु भयो ।
रकम अभावले रंगशाला निर्माणको काम प्रभावित भएको भन्दै आफूहरु मेची महाकाली अभियानमा जुटेको उहाँले बताउनु भयो । रंगशाला निर्माण अभियानलाई असफल बनाउन बिभिन्न भ्रमहरु आइरहेको भन्दै त्यसप्रति नलाग्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
रंगशाला निर्माणमा आफूहरुको कुनै स्वार्थ नरहेको भन्दै देश बनाउने एक मात्र उद्धेश्य रहेको उहाँले बताउनु भयो । सहयोग गर्न इच्छुकले सानोठुलो जति पनि सहयोग गर्न सक्ने उहाँको भनाई छ ।
आफूहरुले सहयोगको लागि कुनै कर नगर्ने र स्वतस्फुर्त आयोजना हुने जुनसुकै सहयोग कार्यक्रममा सहभागि हुने हास्यकलाकार पाँडेले बताउनु भयो । पश्चिमतिरको अभियान सकेर टोली कपिलवस्तु आएको हो । यसपछि टोली नवलपरासी, रुपन्देहीतर्फ जाने छ ।